» नयाँ सङ्क्रमित भेटिएपछि सरकार थप रणनीतिमा
नयाँ सङ्क्रमित भेटिएपछि सरकार थप रणनीतिमा
१३ चैत्र २०७६, बिहीबार ०८:०२ प्रकाशित
काठमाडौं – स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले बुधबार थप १ जनामा कोभिड–१९ पोजिटिभ देखिएपछि थप रणनीति अपनाउने भएको छ । कोरोना भाइरसको नमूना परीक्षणका क्रममा विदेशबाट आएकामा पोजिटिभ देखिएपछि थप रणनीति अपनाउन लागिएको हो । मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. विकास देवकोटाले अहिले अपनाइएको रणनीतिलाई थप मजबुत बनाउँदै लगिने बताए ।
बुधबार खाडी मुलुकबाट आएका १ जनामा नमूना परीक्षणका क्रममा कोभिड–१९ पोजिटिभ देखिएको हो । यसअघि फ्रान्सबाट कतार हुँदै आएकी १९ वर्षीया युवतीमा कोभिड–१९ पोजिटिभ देखिएको हो । उनीहरु दुवैको अहिले शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल टेकुमा उपचार भइरहेको छ । यसअघि चीनबाट आएका १ जनामा संक्रमण देखिए पनि उपचारपछि निको भएको थियो ।
‘‘हिजोसम्म एउटा मात्र केस थियो । उहाँलाई हामीले निको बनाएर पठाएका थियौँ तर अहिले लगातार थप दुई वटा केस देखिन थालेपछि अब हामीले केही नयाँ रणनीति बनाउनुपर्ने हुन्छ’’, डा देवकोटाले भने । उनका अनुसार पहिलो रणनीतिमा अहिले बाहिरबाट आएका मानिसलाई अत्यन्त व्यवस्थित गरेर होम क्वारेन्टाइनमा राख्ने र त्यसबाट अरुलाई सार्न नदिने तथा क्वारेन्टाइनमा बसेकालाई केही समस्या परेमा तिनको उपचार सरकारले गर्छ ।
उनले विदेशबाट आएका सबैको परीक्षण गर्न जरुरी छैन भन्दै सबै आआफ्ना घरमा बसे भने संक्रमण फैलिन नपाउने बताए ।‘‘विदेशबाट आएका सबै न संक्रमित हुनुहुन्छ न त नमूना परीक्षण जरुरी रहेको छ । उनीहरु आफ्नै घरमा एक्लै बसून् भनेर लक डाउन गरिएको हो’’, उनले भने, ‘‘‘विदेशबाट आएकाकामा रोगको लक्षण देखियो भने आइसोलेसनमा राखेर परीक्षण गर्ने हो ।’’
अझै संक्रमण बढ्न सक्ने
उनले अझै पनि कोभिड–१९ पोजिटिभ देखिन सक्ने पनि बताए ।‘‘कोभिड–१९ पाजिटिभ देखिन सक्छ भनेर नै हामी तयारी अवस्थामा बस्नका लागि लक डाउन गरिएको हो । देखिएकोलाई सरकारले उपचार गर्ने र बाँकी घरघरमा बस्ने हो ’’, उनले भने । कोभिड–१९ पोजिटिभ बढ्दै गए भने अस्पतालमा तयारीलाई तीव्रता दिइने बताउँदै डा. देवकोटाले अस्पतालमा सघन उपचार कक्ष थप गरेर संक्रमितको उपचार गरिने जानकारी दिए ।
उनका अनुसार अहिले शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल टेकुमा थप १० सघन उपचार कक्ष निर्माण सुरु गरिएको छ । यसैगरी, पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको एउटा भवनमा र बलम्बुस्थित सशस्त्र प्रहरी बल अस्पताललाई पनि छुट्टै कोरोनाका बिरामी राख्नका लागि अस्पताल बनाउन थालिएकाले अहिले देखिएका समस्या समाधान गर्न सकिने उनको भनाइ थियो ।
उनका अनुसार अहिलेको शुक्रराज अस्पतालमा एक हप्तामा चार हजार जनाको नमूना परीक्षण गर्न सक्ने क्षमता छ । सरकारले खरिपाटीमा एक हजार शैया निर्माण गर्ने निर्णयको कार्यान्वयन हुँदैछ । निजी अस्पताल पनि छुट्टै भवन दिन सक्ने बनाउन मन्त्रालयले चिठी पठाएकाले बिरामी राख्न समस्या नहुने उनको भनाइ थियो ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. देवकोटाले कोरोना भाइरस रोकथाम गर्न केही चुनौतीसमेत रहेको बताए । कतिपय अस्पतालले बिरामीको नमूना नै परीक्षण नगरी फर्काउने (रिफर¬ गर्ने ) गरेकाले केही चुनौती थपिएको उनको धारणा थियो । ‘‘यदि सम्भावित संक्रमित हो भने आइसोलेसनमा राख्नुपर्छ’’, उनले भने, ‘‘तर अस्पतालले आइसोलेसनमा नराखेर रिफर गर्ने गरेका छन् । त्यस्तो गर्न मिल्दैन । अस्पतालको आफ्नै आइसोलेसन वार्डमा त्यस्ता संक्रमितलाई राख्नुपर्छ ।’’
विश्वव्यापी सामग्रीको संकट भएका बेला व्यक्तिगत सुरक्षा सामग्री (पिपिई) केही अस्पतालले आफैं बनाइरहेको समेत उनले जानकारी दिँदै लुकाइएका सामग्री आफूहरुले खोजी गरिहेको बताए ।‘‘ जे जति छ, त्यो हामीलाई दिनुहोस् । लुकाउन पाइँदैन’’, उनले भने, ‘‘लुकाएको थाहा पाए हामी खोज्छाँै ।’’ उनले अपुग सामग्री चीनबाट ल्याउने प्रक्रिया रहेको पनि जानकारी दिए ।
चीनको हुबेइ प्रान्तको वुहान सहरबाट उत्पन्न भएको कोभिड–१९ अहिले विश्वभरि नै महामारीका रुपमा फैलिएको छ । अहिलेसम्म स्वास्थ्य मन्त्रालयको तथ्यांक अनुसार नेपालमा ६८७ जनाको कोभिड–१९ को नमूना परीक्षण भएकामा ६८४ मा नेगेटिभ तथा ३ जनामा पोजिटिभ देखिएको छ ।
दसैँ बिदामा सौराहाका होटल भरिभराउ